CUA: hatao isaky ny boriborintany ny Andron’ny vehivavy | NewsMada
CUA: hatao isaky ny boriborintany ny Andron’ny vehivavy
Nanao fandaminana manokana ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho fanamarihana ny Andron’ny vehivavy amin’ity taona ity. Hotanterahina eny anivon’ny boriborintany enina ny fankalazana mandritra ny andro misesy.
Hisy ny hetsika ara-pahasalamana momba ny fiainam-piarahamonina ary mahakasika ny fandraharahan’ny vehivavy. Ny 9, ny 10 ary ny 11 marsa ny hanatanterahana izany.
Hiparitaka amin’ny toerana samihafa, araka izany, ny hetsika. Anisan’izany ny ao amin’ny BMH Isotry, ny CSB Volosarika, ny CSB Andravoahangy, ny CSB Namontana, ny kianja fanaovana basikety Amboditsiry ary ny CSB Ambohidroa.
Ny 12 marsa, hisy ny fihaonambe hamintinana ny hetsika nandritra ny herinandro, handraisana andriambavilanitra vitsivitsy fitenenana. Eo koa ny hanamarihana ny tetikasa vaovao momba ny fitsipika mifehy ny fitondrantena eo anivon’ny kaominina miompana amin’ny mety hosedrain’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny asa.